Inkcazo:Uyilo lwesithuba esikhulu-ntathu, olulungele iikati ezinkulu kunye nezinja. Iwindow enkulu yekrini yangaphambili + yomngxunya wokungenisa umoya phezulu inika izilwanyana zasekhaya amava ahlaziyayo ehlotyeni. Uyilo olusebenzayo olusebenzayo, ukugcina indawo kunye nokuhamba ngokulula. Uyilo anti-ukubaleka kabini, anti-lokuvula uziphu + bopha ibambelele. Uyilo lohlengahlengiso olunemikhombandlela emininzi lwenza ukuba lulungele kwaye luzinze ngasemva, kwaye umtya ongaphezulu wegxalaba unokulungiswa, okwenza kube lula ukuwuthwala. Uyilo lwendalo iphela kumaxesha amane onyaka, iindlela ezimbini kunye nokusetyenziswa okuninzi kweshutter roller. Amanqaku oxinzelelo amahlanu, amanqaku oxinzelelo alinganayo esinqeni, egxalabeni, esifubeni, ngasemva kunye neempundu, ukunciphisa uxinzelelo lokuthwala. Iigobolondo zeplastiki ezingabonakaliyo, nceda ubumnyama, ukukhanya kwangoko, vumela iikati zijonge umhlaba kwaye zive zikhuselekile. Indawo enkulu ivumela izilwanyana ukuba zijike kwaye zikhululeke.
Egqithileyo INgonyama IiNdlebe ezincinane IWig Inja Hat Pet Wig yajika yaba yiHat Funny Hat Cat Headgear
Okulandelayo: Iingubo zePuppy zeNja yabasetyhini uTeddy Bichon Pomeranian Schnauzer Encinci eQinisekayo yePetini enemilenze emine kunye nengubo yasebusika